July 2019 – MM Crime
ဗစ်တိုရီးယား ဓာတ်ပုံများ ဖြန့်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက်သူကို တရားစွဲရန်ပြင်
ဗစ်တိုရီးယား ဓာတ်ပုံများ ဖြန့်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက်သူကို တရားစွဲရန်ပြင် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်ခံခဲ့ရသည့် ဗစ်တိုးရီးယား၏ ဓာတ်ပုံများကို ရှာ၍ အများသိအောင် ဖြန့်ဝေသွားမည်ဟု ခြိမ်းခြောက်သူကို တရားစွဲဆိုသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဗစ်တိုးရီးယားအမှုနှင့် ပတ်သက်၍ လိုက်ပါ ဆောင်ရွက်နေသူ ဒေါက်တာ ဝင်းကိုကိုသိန်း (သက္ကမိုးညို) က ပြောသည်။ ထိုသို့ ခြိမ်းခြောက်ပြောဆိုသူ၏ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာကို ရှာဖွေမှုအရ ထိုပုဂ္ဂိုလ်မှာ ကျောင်းဆရာ တဦးဖြစ်နေပြီး မိုးမခ (Moe Ma Kha)၊ ခမမိုး (Ka Ma Moe) အမည်များဖြင့် ဖွင့်ထားသည့် အကောင့်များကို အသုံးပြု၍ ဗစ်တိုရီးယားနှင့် ပတ်သက်ပြီး ခြိမ်းခြောက်စာများ တင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ထိုဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး သက္ကမိုးညို အပါအဝင် ဗစ်တိုးရီယား၏ ဖခင်နှင့် […]
ဗစ်တိုးရီးယား အမှု အရေးကြီး ဖြစ်စဉ်မျာ
ဗစ်တိုးရီးယား အမှု အရေးကြီး ဖြစ်စဉ်များ ——————————— ဗစ်တိုးရီးယားလေး အမှုဟာ အခုဆို ရက်က ရှည်လျားလာခဲ့ပါပြီ။ သမီးငယ်တောင်မှ မှတ်မိပါတော့မလား စိတ်ပူနေရပါတယ်။ အခု အမှု ဖြစ်စဉ်ထဲက အရေးကြီး ရက်စွဲတွေကို ထုတ်ပြပါရစေ ၁၆.၅.၁၉ အမှုစတင် ဖြစ်ပွား ၁၇.၅. ၁၉ အမှုစတင်ဖွင့်လှစ် ၃၀.၅.၁၉ သံသယတရားခံ အောင်ကြီးအား ရမန်ယူ စစ်ဆေး ၃၁.၅. ၁၉ ပိုးဖြူအကောင့်မှ လူမှုကွန်ယက်တွင် စတင် ၃.၆.၁၉ စီအိုင်ဒီမှ အမှုလွှဲပြောင်းယူ ၁၃.၆.၁၉ wisdom hill မှ အွန်လိုင်းတွေ ရေးသားနေမှုများအား ကြေညာချက်ထုတ် သတိပေး ၂၄.၆.၁၉ ရမန်ပြည့်၍ အောင်ကြီးအား လွှတ်ပေး ၃၀.၆.၁၉ သမ္မတရုံးမှ ဦးဇော်ဌေးမှ အမှု မပေါ်ပေါ်အောင် […]
အင်းစိန်​ရွာမ ဆရာ​တော်​ဘုရားကြီး ဘဒ္ဒန္တတိ​လောကာဘိဝံသ အကြောင်း.
အင်းစိန်​ရွာမ ဆရာ​တော်​ဘုရားကြီး ဘဒ္ဒန္တတိ​လောကာဘိဝံသ အကြောင်း. ဖွားမြင်​​တော်​မူခြင်း ============ ဆရာ​တော်​အလောင်းအလျာကို ဧရာဝတီတိုင်း၊ ဇလွန်​မြို့နယ်​၊ ​ညောင်​ပင်​သာရွာမှာ ခမည်း​တော်​ ဦးဘ​ဖေ + မယ်​​တော်​ ​ဒေါ်စိန်​ တို့မှ ၁၃၀၀ ပြည့်​နှစ်​၊ တ​ပေါင်းလဆန်း ၁ ရက်​​နေ့ (၁၈.၂.၁၉၃၉) ​မှာ စတုတ္ထ ​မြောက် သားရတနာအဖြစ်​ ဖွားမြင်​ခဲ့ပါတယ်​။ ရှင်​၊ ရဟန်းအဖြစ်​သို့ ​ရောက်​ရှိ​တော်​မူခြင်း ============================ ဆရာ​တော်​ အ​လောင်းအလျာဟာ (၆) နှစ်​သားအရွယ်​တွင်​ (၁) ကြိမ်​ ၊ (၁၅) နှစ်​သားအရွယ်​တွင်​ (၁) ကြိမ်​ ရှင်​သာမ​ဏေ အဖြစ်​သို့ ​ရောက်​ရှိ​တော်​မူခဲ့ပြီး ဘွဲ့​တော်​မှာ ရှင်​တိ​လောက ဖြစ်​ပါတယ်​။ သက်​​တော်​ (၂၀) အရွယ်​ ၁၃၂၀ ခုနှစ်​ ၊ ကဆုန်​လဆန်း […]
မြင့်မြတ် နဲ့ ရုပ်ရှင်ကား ရိုက်ကူးမယ့် 🥰ဆွန်ဆွန်🥰
မြင့်မြတ် နဲ့ ရုပ်ရှင်ကား ရိုက်ကူးမယ့် 🥰ဆွန်ဆွန်🥰 ထိုင်း Net Idol Maeya Sun Sun (ဆွန်ဆွန်) ဟာ သရုပ်ဆောင် မြင့်မြတ် နဲ့အတူ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ရိုက်ကူးသွားမယ် လို့ သိရပါတယ်။ “မြင့်မြတ် နဲ့ ကလောမှာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ရိုက်ကူးဖို့ ရှိတယ်။ ကာရိုက်တာ ကိုတော့ မသိရသေးပါဘူး။ အခုလို ရိုက်ကူးခွင့် ရလို့ အရမ်း ၀မ်းသာတယ်။ စိတ်လည်း လှုပ်ရှားနေပါတယ်” လို့ MC ကို ပြောပါတယ်။ #MyintMyat #MaeyaSunSun #ThaiNetIdol #MyanmarMovie
မိုရီဆာကီဝင်းနှင့် နေခြည်ဦးတို့ ပါဝင်သည့် ‘အိပ်မက်တွေ မိုးထားတဲ့အိမ်’ ဇာတ်လမ်းတွဲ ရိုက်ကူးမည်
မိုရီဆာကီဝင်းနှင့် နေခြည်ဦးတို့ ပါဝင်သည့် ‘အိပ်မက်တွေ မိုးထားတဲ့အိမ်’ ဇာတ်လမ်းတွဲ ရိုက်ကူးမည် မြန်မာပရိသတ်အချစ်တော် အဆိုတော် သရုပ်ဆောင်မင်းသား မိုရီဆာကီဝင်းနဲ့ နေခြည်ဦးတို့ ပါဝင်ကြမယ့် “အိပ်မက်တွေ မိုးထားတဲ့ အိမ်” ဇာတ်လမ်းတွဲကို လာမယ့် အောက်တိုဘာလမှာ စတင်ပြီး ရိုက်ကူးသွားဖို့ ရှိနေပါတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲကိုတော့ Myanmar Media7နဲ့ MNTV ရုပ်သံတို့ ပူးပေါင်းတင် ဆက်လိုက်တာဖြစ်ပြီး မိုးစက်ဝိုင်ရဲ့ ဇာတ်ညွှန်းကို ဒါရိုက်တာ ပွင့်သိင်္ဂီဇော်က ရိုက်ကူးပုံ ဖော်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကားထဲမှာ တခြားသရုပ်ဆောင်တွေအနေနဲ့ ချမ်းမင်းရဲထွဋ်၊ အောင်လေး၊ အုပ်စိုး ခန့်၊ ညီနန္ဒ၊ ရွှေရင်အေး၊ သဲနန္ဒာစိုး၊ မေနွယ်ထွန်း၊ ဝမ်ဝမ်း၊ ကေညီစတဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေ လည်း ပါဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေက […]
သူ့ကိုယ်သူဘုရားလောင်းဟုဆိုသူ ( ရှာတွေ့ပြီ )
သူ့ကိုယ်သူဘုရားလောင်းဟုဆိုသူ ( ရှာတွေ့ပြီ ) သူ့ကိုယ်သူဘုရားလောင်းဟုဆိုသူ ( ရှာတွေ့ပြီ ) ရှာတွေ့ပြီ……သူ့ကိုယ်သူဘုရားလောင်းဟုဆိုသည်…….ဒီဘာသာ သာသနာစော်ကားတဲ့မိစ္ဆာအမှိုက်ကိုယ် ယဉ်ကျေးမှုနှင့်သာသနာရေးဝန်ကြီးဦးအောင်ကို ဘယ်လို လုပ်မှာလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်လျှက်ပါ။ ဒီကောင်တွေ အဓမ္မစကားတွေပြောနေတာကို ဘယ်သူဦးဆောင်ပီးတရားစွဲမလဲ ၂၉၅ သာညိုးနဲ့ စွဲရမလား…..။ ဆရာတော် ဘုရားကြီးတွေကို စော်စော်ကားကား ပြောချင်တိုင်းပြောနေကြတာ နိုင်ငံတော်သမ္မတတွေ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တွေ နာမည်ခဏ ခဏထည့်ပြောပီး….. ဦးဆောင်ပီး တရားစွဲ မည့်လူပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခု ရှိပါက တရားစွဲ စရိတ် အဖြစ် ၅သိန်းကျပ် တိတိ လှူဒါန်းပါမည်။ Kyaw Soe Han /ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ် 09692008888 စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာခရိုင်၊ ပုလဲမြို့နယ်၊ ကျေးနင်းကြီးအုပ်စု၊ သင်တီးကန်ကျေးရွာမှာနေထိုင်တဲ့ဘုရားလောင်းပဒုကုသလအသောက (တစ်ကိုယ်တော်ထောက်လှမ်းရေး)တဲ့…… အောက်မှာ သန်းထိုက်အောင် အကောင့်လင့်ချပေးထားပါတယ်…. […]
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကိုယ်ပိုင်ဂြိုဟ်တု Myanmar Sat2ကို လာမည့် ဩဂုတ် ၇ ရက် နံနက် ၂ နာရီတွင် လွှတ်တင်မည် ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗ တောင်အမေရိကတိုက်၏ ပြင်သစ်ဂီယာနာ (French Guiana)ရှိ အာရိယန် အာကာသဒုံးပျံပစ်လွှတ်ရေး အခြေစိုက်စခန်း (Ariane Space Launch Base)သို့ ရောက်ရှိနေသော မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကိုယ်ပိုင်ဂြိုဟ်တု Myanmar Sat2သို့မဟုတ် Intelsat 39 ဟုခေါ်သည့် မြေပြင်တည်ငြိမ် ပတ်လမ်းသွား ဆက်သွယ်ရေးဂြိုဟ်တုကို လာမည့် ဩဂုတ် ၇ ရက် နံနက် ၂ နာရီတွင် လွှတ်တင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာ လုံခြုံရေးဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။ Myanmar Sat […]
မုဒိမ်းသမားနေရာတွင် သရုပ်ဆောင်ရန် လာရောက်လျှောက်ထားသူ တစ်ထောင်နီးပါးရှိပြီဖြစ်ကြောင်းပြောပြလာတဲ့ ဒါရိုက်တာ ညိုမင်းလွင်
မုဒိမ်းသမားနေရာတွင် သရုပ်ဆောင်ရန် လာရောက်လျှောက်ထားသူ တစ်ထောင်နီးပါးရှိပြီဖြစ်ကြောင်းပြောပြလာတဲ့ ဒါရိုက်တာ ညိုမင်းလွင် မုဒိမ်းကျင့်ခံရပြီးအသတ်ခံလိုက်ရသည့် မြမြရဲ့အကြောင်းကို ဇာတ်လမ်းအသွင်ပြန်လည်ရိုက်ကူးမည့် ဒါရိုက်တာ ညိုမင်းလွင် က မုဒိမ်းသမားနေရာပ သရုပ်ဆောင်ရန် သရုပ်ဆောင် သုံးဦးခေါ်ယူရာတွင် ယခုလာရောက်လျှောက်ထားသူ တစ်ထောင်နီးပါး ရှိကြောင်း ဒါရိုက်တာညိုမင်းလွင်ကပြောသည်။ မြမြ နေရာမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်မည့် အမျိုးသမီးသရုပ်ဆောင်ကိုရွေးချယ်ပြီးပြီ ဖြစ်သလို မုဒိမ်းသမား သုံးဦးနေရာတွင် သရုပ်ဆောင်မည့် အမျိုးသားသုံးဦး ကို ဒါရိုက်တာ ညိုမင်းလွင် ကိုယ်တိုင်အသုံးပြုသော လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာ ကနေ တရားဝင်ကြော်ငြာ ခဲ့သည်။ “မြမြ နေရာမှာ သရုပ်ဆောင်မယ့် သူ ကို ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရွေူးချယ်ထားပြီးပါပြီ။သူက ဘယ်လောက်ထိ လုပ်နိုင်မလဲ ဆိုတာကို ကျွန်တော် လည်းသိသလို ကျွန်တော်ဘာကိုဆိုလို ချင်တယ် ဘာကို လုပ်ချင်တယ် ဆိုတာကအစသူသိတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်စိတ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ […]
လွှတ်တော်များတွင် တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ် ၅၀ရာခိုင်နှုန်းအထိပါဝင်ရန်မင်းကင်းအမတ်အကြံပြု
တပ်မတော်သည် သိပ်ပျော်နေ၍ လွှတ်တော်တွင် ပါဝင်နေခြင်းမဟုတ် ———————— လွှတ်တော်များတွင် တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ် ၅၀ရာခိုင်နှုန်းအထိပါဝင်ရန်မင်းကင်းအမတ်အကြံပြု —————————————————————— တပ်မတော်သည်လွှတ်တော်ကနေ ရာခိုင်နှုန်း လျော့ချရန် လုံးဝဆုတ်ခွာရန် မဖြစ်နိုင်သေးကြောင်း တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်မဟုတ်သော်လည်း တစ်ခုပြောနိုင်သည်မှာ “တပ်မတော်ဟာသိပ်ပြီးပျော်နေလို့ လွှတ်တော်မှာ ပါဝင်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပဲ” ဟု မင်းကင်းအမတ်ဦးမောင်မြင့်ကဇူလိုင် ၃၀ ရက်တွင်ပြောကြားလိုက်သည်။ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ(၂၀၀၈)ပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးရာတွင် ယင်းသို့ထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အိမ်နီးချင်း ထိုင်ငံနိုင်ငံတွင်ပင် နိုင်ငံ၏ အမျိုးသားရေးလိုအပ်ချက်အရ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဆိုသော်လည်း တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်များ၏ ပါဝင်မှုကို ယခင်ကထက် ရာခိုင်နှုန်းမြှင့်တင်ခဲ့သည်ကို သင်ခန်းစာယူ ရမည်ဟုလည်း ၎င်းကဆိုသည်။ “ဒါကြောင့် ကျွန်တော့်ရဲ့အကြံပြုချက်ကတော့” ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ နှင့် ပြည်နယ်လွှတ်တော်များတွင် တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်များအဖြစ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် စုစုပေါင်း၏ ၅၀ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်သည်။”ဖြစ်ပါတယ်”ဟု မင်းကင်းအမတ် ဦးမောင်မြင့်က ပြောကြားခဲ့သည်။ နိုင်ငံတော်၏ အခြေခံမူများ […]
ရဟန်း မယူရက်တဲ့ ၅ ထောင်တန် အနွမ်း ၁ ရွက်
ရဟန်း မယူရက်တဲ့ ၅ ထောင်တန် အနွမ်း ၁ ရွက် ——————————————————– တစ်နှစ်ခွဲ အရွယ် သားလေး ဆုံးလို့ ရက်လည်ဆွမ်း လာကပ်တဲ့ ဇနီးမောင်နှံဆီက ၅ ထောင်တန်လေးကို အလှူခံလို့ ပြီးမြောက်ပြီးမှ မယူရက်ဖြစ်ပြီး ပြန်စွန့်ခဲ့တဲ့ ဝါရှောင် ဆရာတော်ဘုရားကြီး.. ဒီနေ့ မနက်ခင်း ၇း၄၅လောက်မှာ သူတို့၂ယောက် ကျောင်းပေါ်ကို ဆွမ်းချိုင့်သေးလေးကိုင်ပြီး ရွံ့တွန့်အားငယ်တဲ့မျက်နှာကိုယ်စီနဲ့ ရောက်လာတော့ သူတို့ကို “ဘယ်ကလဲ?နော်!မေးတော့ ပါဝါနိုင်းငှက်ပျောခြံကပါ ဘုရား!ဘာအတွက်လဲ?မသိဘူးနော် ဆိုတော့ တပည့်တော်တို့ သားလေးဆုံးတာ ရက်လည်ဆွမ်းကပ်ချင်လို့ပါ ဆုံးတဲ့နေ့က တပည့်တော် ဒီမှာ ဆွမ်းလာကပ်သေးပါတယ် ဘုရား လို့ ကောင်လေးကပြန်ဖြေတော့ သြော်!မှတ်မိပြီ အဲဒီနေ့က တပည့်တော်ပဲ လာတာပါ အခု တပည့်တော်တို့၂ယောက်လုံး လာကပ်တာပါ ဘုရား တဲ့!! […]